महिला साथीलाई सन्तुष्ट पार्न कति समयसम्म यौनसम्बन्ध राख्नुपर्छ ? – Rastriyapatrika
महिला साथीलाई सन्तुष्ट पार्न कति समयसम्म यौनसम्बन्ध राख्नुपर्छ ?
गर्भधारणपछि सेक्स गर्दा के हुन्छ ?
गर्भधारणपछि महिलाले सेक्स गर्नुहुँदैन भन्ने भ्रम व्याप्त छ। तर, चिकित्सकका अनुसार यस बेला महिलाले बिना कुनै संकोच सेक्स गरे हुन्छ। गर्भवती महिलाले सेक्स गर्दा कुनै गर्भको बच्चा र उनको स्वास्थ्यमा कुनै असर पर्दैन। बरु, नियमित सेक्सले उनलाई बच्चा पाउन सजिलो हुनसक्छ। पेटमा दबाब पर्ने गरी भने सेक्स गर्नुहुँदैन। यौनासन परिवर्तन गर्नुपर्छ। पुरुष माथि महिला तल हुने आसनभन्दा छड्के या पछाडिबाट सेक्स गर्ने आसन उपयुक्त हुन्छ।
बच्चा पाएपछि योनी खुकुलो हुन्छ ?
बच्चा पाएपछि योनी खुकुलो हुन्छ र सेक्स गर्दा मज्जा आउँदैन भन्ने भ्रम रहेका पनि थुप्रै हुन्छन्। बच्चा पाएपछि केही समयका लागि योनीद्वार खुकुलो भए पनि यो बिस्तारै पुरानै साइजमा आउँछ। डेलिभरी हुँदा योनी च्यातिएमा त्यसलाई सिलाउने पनि गरिन्छ। योनीको तन्तुहरूको प्रकृति नै लिंगको साइजअनुसार एडजस्ट हुने खालको हुन्छ। यो लिंगको साइजअनुसार संकुचन हुने र फुक्ने गर्छ